Nghọta - Gịnị ka masturbation pụtara na olee otu onye si eme ya?
Olee otú masturbation maka ụmụ nwoke?
Kedu otu masturbation maka ụmụ nwanyị?
N'ikwu ya, isi ihe kachasị mkpa bụ ịkọwa onwe onye bụ na ọ bụ ihe zuru oke. Masturbation ọbụna dị na anụ anụmanụ, ya mere na ọ bụ ihe ọ bụla ihere. Tụkwasị na nke ahụ, onye ọ bụla bụ ezigbo mmadụ, ya bụ, ọ dịghị usoro nchịkọta maka mmadụ nile.
Gịnị ka masturbation pụtara?
Ya mere, ihe niile dị mkpa maka afọ ojuju onwe onye, ​​nke na-enye onwe gị ọṅụ, n'enweghị onye mmekọ. Enwere ike ime nke a site n'iji aka aka ma ọ bụ ụfọdụ sextoys, nke a na-akwado site n'echiche efu, akwụkwọ, foto ma ọ bụ ihe nkiri.
Mmekorita onwe ya na-emezu nzube dị mkpa maka mmepe ya, karịsịa maka ndị nọ n'afọ iri na ụma: Site n'ịchọgharị ọchịchọ nke onwe ha, ha na-enwe mmekọrịta dị mma na ahụ ha n'oge ha bụ nwata ma si otú a mụta ihe gbasara mkpa mmekọahụ ha nwere. Tụkwasị na nke ahụ, na masturbation, yana n'oge mmekorita, a napụtara ndị homonụ obi ụtọ, ka o wee nwee ike belata belata.
Ịgba aghara maka ụmụ nwoke dị mfe. Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụ iji mee ka mkpanaka ahụ ruo na njedebe. N'ihi nke a, ejiri aka gị kpuchie ogwe aka ahụ, ike nke ahụ na-adabere kpamkpam na mmasị nke aka gị, na mmegharị kwesịrị ekwesị na-aga n'ihu na-eme ka obi sie ike.
Masturbation ke nwoke
Ihe dị mkpa ebe a bụ iji obụl kwesịrị ekwesị iji zere akpịrị. Enwere ike ịbawanye ụba na oge tempo, ma ọ bụ dịgasị iche iche ugboro ugboro.
Otú ọ dị, e nwekwara ndị a na-akpọ masturbators maka ụmụ nwoke, nke a na-emepụta na ezigbo ikpu. Mgbe ụfọdụ, a na-ahụkarị ọgba caba ndị a, ọ na-esikarị mgbe ụfọdụ na-adịchaghị mma, na mgbe ufodu, ha nwere ike iji ihe mmetụ ma ọ bụ ọbụna obere nsị.
N'ezie, ụmụ nwoke nwekwara ike ime ka ha nwee obi ụtọ: Mkpịsị aka dị iche iche na-egbochi ọbara na-esi n'osisi erectile pụta mgbe ọ gachara. Ụlọ ere ahụ na-anọgide maka nke abụọ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya na ị ga-adị njikere ịkwado ọgwụ, mgbe niile, ọ ga-esiri gị ike ịba n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ mgbe ị gachara. Uzo di iche iche site na mgbasaozi, dika ima ogwu akuku apple ma obu ihe ndi ocha ncha, adighi akwadoro maka ihe di mma n'uzo. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụnye ihe, ị kwesịrị ị na-eme ihe ndị kwesịrị ekwesị maka mmekọahụ, n'ihi na naanị ndị a na-ekwenye na ọ dịghị ihe ize ndụ ahụike. Mgbe e jiri ya mee ihe, a ga-ehichapụ ihe ndị a eji egwuri egwu.
Mkpebi ndị pụrụ iche pụrụ iche na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta nke P-ntụpọ, ihe dị ka sentimita ole na ole n'ime mgbidi nke mgbidi ahụ. Ụfọdụ ndị ikom nwere ike ịmalite site na mkpali a na-emetụ n'ahụ ma ọ bụrụ na emetụghị mkparịta ụka ahụ ọkụ - ebe a, dịka ọ dị mma ịnwale. Otú ọ dị, ebe a bụ ụzọ nlezianya kwesịrị ekwesị, n'ihi na a ghaghị ibu ụzọ jiri ọgwụgwọ ahụ. Iji hụ P-isi n'ụzọ zuru oke, e nwere ihe nkiri egwuregwu ndị dị iche iche, mgbe ụfọdụ ọbụna na nkeji mgbidi.
Ihe pụrụ iche na-enye masturbation maka ahụ ike nke ụmụ nwoke: Ejaculation mgbe nile, ma ọ bụ site na masturbation ma ọ bụ mmekọahụ, na-egbochi nsogbu prostate n'ọdịnihu.
Maka ụmụ nwanyị, masturbation dị ntakịrị karịa, ebe ọ bụ na ọ bụghị nwanyi ọ bụla na-emetụ ụfọdụ aka. Ọtụtụ mgbe, ịhịa akacha ọcha nke ebe ndị a na-ebipụta na-ezughị ezu. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji kpalie ndị na-eme ihe na ikpu n'otu oge maka ihe kachasị mma - na, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, G-ya nwekwara ya.
Mmekorita onwe ya
Nke a dị na ihu ihu nke ikpu. Enwere ike iji mkpịsị aka ya nweta ya, ma ọ dị mfe karịa ndị nwere ike iche, nke a na-ahụ maka mmekọahụ. Dị ka o kwesịrị, ihe ndị a egwuri egwu ga-emegharị, mgbe ahụ, maka ndị inyom na-eme onwe ha ihe ọ bụla, ọ ga-ekwe omume.
Dịka ntụziaka n'ozuzu, ike na nkedo nke aka ga-eji nwayọọ nwayọọ mụbaa. A na-enyefe ebe ndị na-egbu egbu nke nwanyị na-enwewanye obi ụtọ, mmetụta aka ha na-echekwa na ọ dị mma nanị mgbe obere oge gasịrị. Na mgbakwunye, ụmụ nwanyị na-ata mmiri n'ezie site na ọkwa ụfọdụ - n'ihi na mmalite nwere ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị iji ndị lubricants.
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ahụ ihe mmetụ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ site na nkwụnye na-agba ume, nke na-akpali akpali. Nke ahụ kwesịrị ịdị jụụ na a nwalere ya na ọtụtụ lubricant. Ihe niile nwere ike, ọ dịghị ihe a ga-eme. Nnukwu ntụrụndụ pụkwara ịbụ ihe mkpali n'otu oge nke mkpịsị ụkwụ, dịka ihe nkwado ma ọ bụ mkpịsị aka nke aka aka.
Enwere otutu masturbation enyemaka maka ụmụ nwanyị. Ụdị dị iche iche dị site na mfe dildo ka vibrator na ihe mgbagwoju anya ebe ụmụ nwanyị nwere ike na-agba ịnyịnya n'ụzọ nkịtị. N'ọtụtụ ọnọdụ, Otú ọ dị, aka abụọ ma ọ bụ naanị dildo ma ọ bụ vibrator zuru ezu.
Mgbe ị na-eji aka gị kwesịrị ijide n'aka na fingernails enweghị ọnụ nkọ ma dị ọcha na aka gị tupu imetọ onwe gị.
Ọbụna ndị inyom ndị nwere nsogbu na-ebute orgasm na-enwe mmekọahụ na-erite uru site na ịmatakwu ógbè ha dị njọ n'oge masturbation. Site na ahụmahụ ụfọdụ, ha nwere ike iji nwayọ kọwaa onye òtù ọlụlụ n'oge mmekorita, nke akụkụ ọ ga-akpali n'ụzọ dịgasị iche iche na iji mee ka ha nwee oke njedebe.